Chile: Mpianatra Manao Dia Lavitr’ezaka Maherin’ny Arivo Kilaometatra ho an’ny Fanabeazam-Bahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Novambra 2010 8:17 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Português, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Aymara, Español
[Raha tsy misy filazana manokana, ny rohy rehetra ato dia amin'ny teny espaniola] Patricio Contreras, Fabián Muñoz, ary José Luis Mansilla, mpianatra telo amin'ny sampana Siansa Politika sy Fitantanana ao amin'ny Anjerimanontolon'i los Lagos, no hamakivaky 1016 km an-tongotra ho fanoherana ny fitsitotongan'ny kalitao sy ny fiakaram-bidin'ny Fanabeazana Siliana. Ilay Dia lavitr'ezaka ho an'ny fanabeazam-bahoaka dia nanomboka tao Puerto Mont ny Alakamisy 30 septambra ary ny tanjona hitodiana dia i Santiago, renivohitr'i Chile (Chili). Ny Dia lavitr'ezaka nataon-dry zareo dia nahazo tohana sy fandrisihana mientanentana avy amin'ny tontolon'ny fitorahana bilaogy sy ireo tambajotra sosialy. Tsy dia misy loatra tati-baovao momba ity Dia lavitr'ezaka ity avy amin'ireo haino amanjery Siliana.
sary avy amin'ny mpianatra, nampiasaina rehefa nahazoana alalana avy amin-dry zareo
Caminata Santiago, na Hitody any Santiago, (@destinosantiago) no anaran'ny kaonty Twitter-ndry zareo ary manana olona efa maherin'ny 400 manaraka azy. Ny teny fanevan-dry zareo dia ny hoe “ante la educación de mercado estudiante organizado” (Mpianatra Mivondrona hanohitra ny Fanabeazana Mifototra fotsiny amin'ny Ara-Bola). Amin'ny alalan'ny pejy Facebook-ndry zareo sy tambajotra sosialy hafa koa no ifanohanan-dry zareo sy anapariahany ny vaovao momba ny hetsika ataony isaky ny faritra samihafa lalovany manerana an'i Chile:
Mpianatra telo avy amin'ny Anjerimanontolon'i Los Lagos, no nanome ny mari-piaingàna tamin'ity Dia lavitr'ezaka ho an'ny fanabeazana Siliana ity tamin'ny Alakamisy 30 Septambra tamin'ny 2 ora tolakandro. Fantatsika fa andraikitsika izany ary an'ny rehetra. Antenainay fa hisy dikany aminareo izany teny fianeva izany mandritry ny Dia lavitr'ezaka hataonay hatrany Santiago. Ary antenainay fa ho marobe ny mpianatra hirotsaka amin'ity hetsika goavana ity.
Ny hevitra dia nipoitra nandritry ny iray tamin'ireo fihaonan'ny Chilean Student Confederation (CONFECH [es]) na Fiombonamben'ny Mpianatra any Chile, ka tamin'izany no nifaneken-dry zareo niaraka tamina mpianatra avy amina Anjerimanontolo hafa ny amin'io tetika fanoherana io ho setrin'ny politikan'ny governemantan'i Sebastián Piñera hametraka ny fitantana ho an'ny tsy miankina. Ireny politika ireny izay niroborobo teo ambanin'ny governemanta roa farany nifandimby teo, tanatin'ny politikan'ny Concertación (Fiaraha-mitantana), araka ny tatitry ny bilaogy mitantara ilay dian'ny fanoherana [es].
Tany ampiandohana, dia mpianatra telo monja no nandroso hevitra ny hanaovana Dia lavitr'ezaka hatrany Santiago, fomba iray hisarihana ny saina ho any amin'ny fanabeazam-bahoaka sy ny tokony hamonjena azy. Nitohy niroso hatrany ry zareo ary nahazo mpanaraka marobe ho amin'ny hetsika ataony. Avy ao amin'ny kaonty Twitter-ndry zareo, ilay vondrona dia miteny fa [es]:
TSY IREO MPITRANDRAKA HARENA AN-KIBON'NY TANY IRERY IHANY NO AFAKA HANOME LESONA HO ANTSIKA. @destinosantiago MANDAO DIA LAVITR'EZAKA HO AN'NY FANABEAZANA ANTSIKA RY ZAREO, HO AN'NY ZANAKAREO, HO ANAREO! RT
Ale Botinelli (@alebottinelli) dia mitondra ny fanohanany amin'ny alàlan'ity sioka ity:
400 km feno fahavononana!! Mandeha miazo an'i Santiago ireo mpianatra mba hisian'ny fanabeazana manana kalitao aroso azy! @destinosantiago RT
Tamin'ny fandalovany tamin'ireo tanàn-dehibe any atsimon'i Chili, nihaona tamin-kafaliana ireo mpianatra: Ireo mpianatra telo avy amin'ny Anjerimanontolo izay nandao an'i Puerto Mont tamin'ny 30 septambra lasa teo ary nisy mpianatra telo hafa nirotsaka koa avy ao Osorno, dia tonga tao Temuco 12 andro taty aoriana, renivohitry ny faritra Araucanía. Noraisin'ny naman-dry zareo tao amin'ny Anjerimanontolon'i Frontera (UFRO) izy ireo ary nitombo koa teo ny mpanara-dia hafa nanatevin-daharana an-dry zareo.
Ny bilaogy Trinchera de la Imagen dia miteny fa ilay Dia lavitr'ezaka dia mikendry ny hanaitra ny sain'ny maro hibanjina ny zava-mitranga eo amin'ny fanabeazana amin'izao fotoana raha mbola eo an-dalam-pandinihana azy indrindra ny Tetibolam-Panjakana 2011. Dinihana ny fandraisan'anjaran'ny fanjakana amin'ny resaka fanabeazana.
Ni fitakiana dia mikendry ny hahazoana vola mismisy kokoa ho an'ny fanabeazana sy hanavaozana lalàna maro, raha ny filazan'ny bilaogy G80 [es].
Ao anatin'ny rafi-pampianarana Siliana, ny lalàn'ny tsena no mavesa-dnja noho ny andraikitra tokony ho raisin'ny Fanjakana amin'ny maha-mpiahy azy ny fanabeazana manara-penitra ho an'ny rehetra. Izay mitarika ny fisiana fanabeazana natao ho an'ny mahantra sy ny mpanana ao Chili. Ireo izay afaka mandoa sarany lafo any amin'ny tsy miankina na ireo toeram-pibeazana tsy miankina mahazo famatsiam-bola dia afaka mifidy fampianarana tsara kalitao. Ho an'izany rehetra izany no itenenanay hoe: “ATSAHARO NY FITADIAVANA TOMBONTSOA AMIN'NY FAMPIANARANA AMBONY, KALITAO HO AN'NY REHETRA”
Ho an'ny Fiombonamben'ny Mpianatra Siliana (CONFECH) indray dia nanambara ry zareo tao amin'ny bilaogin-dry zareo hoe [es]:
Izahay dia tsy misy mitsipaka ary momba sy mirotsaka amin'ilay hetsika natombok'ireo mpianatra avy amin'ny Fiombonamben'ny Mpianatry ny Anjerimanontolon'i Los Lagos (ao Puerto Montt), izay nanomboka ity Dia lavitr'ezaka ity niala avy tany an-tanànany ho any amin'ny renivohi-pirenena. Anatin'ny diany dia miantso ny mpianatra sy ny rehetra koa ry zareo mba hirotsaka amin'ny hetsika ataony, manameloka ny vinavinan'ny governemanta hanome ny fitantanana ho an'ny tsy miankina , ka hanohana ny fiarovana sy ny fampiroboroboana ny fanabeazam-bahoaka.
Comunicaciones FECH dia manolotra ilay Dia lavitr'ezaka ho toy ny hetsika fanoherana am-pilaminana miezaka misarika ny saina amin'ny tsy fahombiazan'ny rafi-panabeazana Siliana, izay tsy mitsaha-mitombo ny sarany ary miantraika amin'ny fahafaha-manjifan'ny isan-tokantrano sy ny mpianatra. Ny saran'ny fidirana amin'ny anjerimanontolo izay mametraka an'i Chili ho laharana faha-enina manerantany amin'ny halafosany. Ny tatitra dia milaza fa efa nialàn'ny Fanjakana madiodio:
Raha ny fijerin'i Cesar Mallipán, ao anaty gazety an-tsoratra iray ao an-toerana : “ arakaraky ny androsoantsika no ilàntsika manohy ny resaka mikasika ny fitakiantsika. Maika ny filàna famatsiam-bola goavana ho an'ireo anjerimanontolo tantanan'ny fanjakana ary amin'ny fomba demaokratika.”
Pulso: Porque Chile Late [es] sy Redmedios [es] dia mitatitra mikasika ilay Dia lavitr'ezaka sady manentana ny hafa hirotsaka:
“Ry mpianatra avy amin'ny Anjerimanontolo Siliana, ateveno ny dia”
Mandritra izany ao amin'ny Twitter, be ny hafatra sy fanentanana ho fanohanana sy firaisankina nivoaka. Ohatra iray ny hafatr'i Veronica Ramirez (@noalachibueno):
Isanandro dia maniry mpianatra maro hirotsaka amin'ity Dia lavitr'ezaka ho an'ny kalitaon'ny fanabeazam-bahoaka ity aho.
Rene Aucapan (@ReneAucapan) sy mpampiasa Twitter hafa no nanomboka niantso fanohanana bebe kokoa tamin'ny alalan'ireo tambajotra sosialy:
Izaho koa manohana ilay Dia lavitr'ezaka ataon'ireo mpianatra fo an'ny Fanabeazam-Bahoaka#YoApoyoCaminataEstudiantesUniversitarios
Caminata Santiago (@destinosantiago) dia mamoaka fanampim-baovao isanandro mikasika ireo tanan-dehibe lalovany ary momba ny hetsika fampahafantarana ataon'ny mpianatry ny Anjerimanontolo. Ny hafatra dia mafy sy mazava:
Dia aiza izao ireo niteny fa eny antsasa-dàlana dia hiverina ireo mpanao Dia lavitr'ezaka ? Ho an'ny Fanabeazam-Bahoaka tsara kalitao, Mahereza sy mahatanjaha ry Namako isany!! RT!!